Aya ndiwo maitiro aunogona kunyorera USB memory mune macOS Sierra | Ndinobva mac
Kangani iwe wakambofunga kuti iyo USB ndangariro haina kuchengetedzeka kuve nemafuta akakosha kwazvo? Wakamira kuti ufunge kana zviripo imwe nzira yekuinyora kuti igare yakachengeteka? Anenge makore mana apfuura ini pachezvangu ndakatsanangura maitiro aunogona kunyora chiyeuchidzo che USB mune Mac inoshanda sisitimu.
Nhasi kubasa mumwe wandinoshanda naye akandibvunza nezvazvo uye ndinofunga zvakakodzera kuti vateveri vedu vese vazive zvakare maitiro ekunyora uku, nenzira iyi Isu tinogadziridza pfungwa uye ruzivo uye isu tinogona kuisa zvese kuita.
Apple yafunga nezvazvo uyezve pane nzira yekunyorera USB memory mune macOS Sierra. Zviri nezve maitiro ari nyore kwazvo uye zvinokutorera isingasviki maminitsi maviri. kuzviita. Kuti uite izvi, zvese zvaunofanirwa kuita kubatanidza USB ndangariro kuMac uye wozoenda kubarbar rewadhi reT Finder ku kurudyi tinya pane USB yawakabatanidza uye scroll to iyo "Encrypt" sarudzo.
Abtes kuenderera mberi nekunyorwa kwendangariro isu tinofanirwa kukuyeuchidza iwe kuti kana yakanyorwa chete inogona kungoverengwa paMac makomputa uye kwete maWindows PC, saka iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve izvo iwe zvaunoda kuita usati wabaya.
Kana iwe ukabaya pa "encrypt the unit" tinoratidzwa hwindo umo matinoziviswa kuti patinoisa kodhi yekukiya iyo ngatirege kukanganwa nekuti maitiro acho haakwanise kubviswa neimwe nzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Aya ndiwo maitiro aunogona kunyorera tsvimbo ye USB mune macOS Sierra